प्रधानमन्त्री ओली हुकुमी शासक बन्न खोज्दैः केसी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा सत्ता र शक्तिको उन्माद भएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हुकुमी शासन’ गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टस क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने,‘ प्रधानमन्त्री अहिले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्न उद्धत हुनुहुन्छ । उनमा जंगबहादुर बन्ने आकांक्षा तीव्र रुपमा विकसित भएको छ ।’ नेता केसीले वर्तमान सरकारको ९ महिने कार्यकाल पुग्न अब चार दिन मात्रै बाँकी छ रहेको सुनाउँदै भने,‘समग्र रुपमा यो सरकार असफलतातर्फ उन्मुख छ । निर्वाचनको बेला जनतामा झुठको पुलिन्दा बाँड्यो । तर, अहिले काम गर्न सकेको छैन् । अहिले सरकार शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिबाट अभिप्रेरित छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले २५ अर्बभन्दा माथिका परियोजनाहरु आफू मातहात केन्द्रित गरेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । केसीले भने,‘यो ९ महिनामा सरकारले के चाहीँ राम्रो काम गर्यो त ? वृद्धभत्ताको कुरा उठाउँदा–उठाउँदै म त थाकिसकें ।
सत्तामा आउनुभन्दा पहिले ओली र प्रचण्डजीले भ्रष्टाचारीहरुलाई जेल हाल्छौं, कारबाही गर्छौं भनेर चर्को स्वरमा बोल्नुभयो । तर, सत्तामा आएपछि अहिलेसम्म केही भएको छ त ? बरु बुढीगण्डकी परियोजना बिना प्रतिष्पर्धा दिईयो ? वाईडबडीको विवाद त्यस्तै छ । साँढे ३३ केजी सुन कहाँ छ ? यो प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई किन गुपचुप राखिएको छ ? राख्नुपर्ने कारण के हो ?’ फरक प्रसंगमा उनले पार्टीको विधानबारे गम्भीर छलफल हुने बताए । मस्यौदा समितिले विधान अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश गर्न नसकेको बताए । ‘विधानका सम्बन्धमा सबैका आ–आफ्ना धारणाहरु हुन्छन् । तर, हामी अन्तिम निश्कर्षमा पुर्याउँछौं–’ उनले भने ।
पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भोलि बोलाईए पनि बैठकका एजेण्डा अहिलेसम्म थाहा नभएको उनले जनाए । उनले भने,‘भोलि बैठक छ । तर, अहिलेसम्म एजेण्डा थाहा छैन् । हुन त मंसिर २ गते नेविसंघ वर्तमान कार्यसमितिको पदावधि सकिँदैछ । सम्भवतः यही विषयमा छलफल हुन्छ होला भनेर मैलेपनि लख काट्ने हो ।’ केसीले नेविसंघको अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले टिके प्रथाबाट मनोनित गर्ने कुराको आफू विरोधी भएको पनि जनाए । उनले भने,‘टिके प्रथाको म हिजोपनि विरोधी थिएँ । आजपनि विरोधी नै हुँ । र, भोलि पनि विरोध गर्छु ।’
नेविसंघमा तदर्थ समिति बनाउने कुरा विकल्प हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ । उनले भने,‘यसको एकमात्र विकल्प भनेको अधिवेशन गर्नुपर्छ । नेताको भजन मण्डलेलाई नेविसंको नेतृत्व सुम्पिनुहुँदैन् । नेविसंघलाई अब पंग्गु र व्यक्तिमुखी नबनाऔं ।’
प्रकाशित ३0 कार्त्तिक २0७५ , शुक्रबार | 2018-11-16 10:43:58